Xildhibaan sidoo kale ahaa Wasiiru dowle oo la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Bishii August 2020 waxaa sidan oo kale Jowhar loogu dilay Wasiirkii Beeraha Maamulka HirShabeelle C/qaadir Abuukar xili uu kasoo baxay Masjid uu Salaadda cishaha ku tukaday.
JOWHAR, Soomaaliya - Allah ha u naxariistee Wasiiru dowlihii Wasaaradda Diinta ee Hirshabeelle Nuur Xaashi Warsame, oo sidoo kalena ahaa Xildhibaan ayaa caawa lagu dilay magaalada Jowhar, oo 90-KM dhanka waqooyi uga beegan Muqdisho.
Goobjooge la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in koox bastoolad ku hubeysan ay toogteen Xildhibaanka si kedis ah xili uu kasoo baxay Masjid uu salaadii Maqribka kusoo tukaday, xilligaas oo ilaalo la socon.
Dableyda ayaa goobta isaga baxsatay kahor inta Ciidanka amniga soo gaarin, waxaana la sheegay in dilkan uu qeyb ka yahay amni darro ka jirta magaaladda Caasimadda u ah HirShabeelle, taasoo ka dhalatay maamul xumada Madaxweyne Waare.
Bishii August 2020 waxaa sidan oo kale Jowhar loogu dilay Wasiirkii Beeraha Maamulka HirShabeelle C/qaadir Abuukar oo sidoo kale isna katirsanaa Baarlamaanka xili uu kasoo baxay Masjid uu Salaadda cishaha ku tukaday.